Tanànan'ny morontsirak'i Asturianina izay tokony hotsidihinao | Bezzia
Tanànan'ny morontsirak'i Asturianina izay tokony hotsidihinao
Maria vazquez | 21/07/2021 10:00 | Tsangatsangana
Asturias dia iray amin'ireo toerana halehantsika. Ary io dia ankoatry ny fananana ny sasany amin'ireo tanàna tsara tarehy indrindra any Espana, any Asturias dia afaka mankafy toetrandro mahafinaritra be ianao amin'ny fahavaratra. Izany no antony anolorantsika tanàna ankehitriny amin'ny morontsirak'i Asturian izay inoantsika fa tsy tokony hotadiavinao.
Amin'ity ampahany voalohany ity dia handeha hamakivaky ny morontsiraka eo anelanelan'i Gijón sy ny sisintany miaraka amin'i Galicia izahay. Avilés, Cudillero ary Luarca izy ireo no firenena voafidy telo. Manasa anao rehetra ho very eny an-dalambe, handeha sy hamerina, mba tsy halahelo ny zorony rehetra.
1.1 Toerana tsy azonao hadinoina ao amin'ny Ivotoerana manan-tantara
Ny tanànan'i Avilés no fijanonanay voalohany. Tanàna natsangana teo amoron'ny ery Avilés, vitsivitsy monja 30 km miala an'i Gijón, manolotra anay iray amin'ireo fiarovan-doha ara-tantara tsara indrindra izay azontsika jerena ao Asturias. Nolazaina fa tranonkala manan-tantara-kanto tamin'ny 1955, ny fahaverezana eny an-dalambe no fomba tsara indrindra hahitana azy, na dia tsy maninona aza ny sarintany.
Toerana tsy azonao hadinoina ao amin'ny Ivotoerana manan-tantara
Ny manodidina an'i Sabugo, fantatra amin'ny anarana hoe mpifanolo-bodirindrina amin'ireo tantsambo, iray amin'ireo faritra kanto indrindra amin'ity ivon-toerana manan-tantara ity.
La Plaza de los Hermanos Orbón, izay misy ny tsenan'i Las Aceñas, naorina tamin'ny taonjato faha-XNUMX.
La Fiangonana Romanesque tamin'ny taonjato faha-XNUMX an'ny Fathers Franciscan any Plaza Carlos Lobo, manoloana ny Museum of Urban History. Ao no misy ny fasan'i Pedro Menéndez, ny fandrosoan'ny Florida, mpitety ary mpanorina ny tanàna tranainy indrindra any Etazonia, St. Augustine of Florida.
La Plaza de España na The Patch sy ny arabe manodidina: Ferrería, Cámara na Rivero
La Plaza de Domingo Álvarez Acebal, izay isan'ny endrika mahafinaritra hafa an'ny an'ny Balsera Palace sy ny Church of San Nicolás de Bari.
Làlana Galiana, arabe 252 metatra monja namboarina tamin'ny taonjato fahafito ambin'ny folo nandritra ny fanitarana ny tanàna ny Baroque. Ny arabe tohana lava indrindra ao Avilés ary ilay hany misy rarivato roa: ny iray natao ho an'ny fitaterana omby ary ny iray hafa vita amin'ny taila ho an'ny olom-pirenena.
Valan-javaboary Ferrera, zaridaina anglisy sahala amin'ny besinimaro ankehitriny, izay fananan'ny Marquis nandritra ny taonjato maro, tao ankavanan'ny Lapan'i Ferrera.
Ho fanampin'izany, mety ho hitanao fa mahaliana ny mitsidika ny Cemetery Monisipaly La Carriona, toerana misy ifandraisany amin'ny tantara sy ny kanto izay ao anatin'ny ASCE (Association of Significant Cementeries in Europe). Ary mazava ho azy ny Niemeyer centre, ivon-toeran-kolontsaina noforonin'ilay mpanao mari-trano Breziliana Óscar Niemeyer ary eo afovoan'ilay vavahady.
Ilay tanàna kely fanjonoana any Cudillero, nanambara toerana manan-tantara momba ny zavakanto, Misongadina amin'ny fandaminana azy amin'ny endrika amiteite sy ny loko falifaly ao an-tranony. Ny antony maha-mendrika ny fitsidihana azy sy ny fahaverezana eo amin'ireo arabe midina sy lalantsara.
Ny fitondrana entina dia fomba tsara indrindra hahitana ny tanàna sy ny fomba fijery tsara indrindra an'ny bay. Aorian'izay, tsara ho anao koa ny mandeha eny amin'ny promenade izay mampifandray ny seranana amin'ny Lighthouse Cudillero, natsangana tamin'ny taona 1858 ary izay no ahazoana fomba fijery kanto mahafinaritra.
Manakaiky an'i Cudillero dia manentana anao aho hitsidika anao koa The Quinta de Selgas, andiana lapa sy fananan-tany mitafy 900000 m2 namboarina teo anelanelan'ny 1880 sy 1895 tamin'ny fandraisana andraikitry ny rahalahy Ezequiel sy Fortunato de Selgas Albuerne Ny lapa dia mitahiry ny haingon-trano tany am-boalohany saika tsy mitongilana, ary misy sary hosodoko ataon'ny tompo lehibe toa an'i Goya, El Greco, Luca Giordano, Corrado Giaquinto ary Vicente Carducho. Ny zaridaina, ho azy ireo, dia mifandimby ny fomba geometrika frantsay tamin'ny taonjato faha-XNUMX sy ny endrika tantaram-pitiavana na kanto izay nanjary lamaody tany Angletera nandritra ny taonjato faha-XNUMX.
Ny Port of Luarca dia toerana be fotôgrafia ary iray amin'ireo tanàna amin'ny morontsirak'i Asturian izay tsy maintsy tsidihinao. Fantatra amin'ny anarana hoe White Villa, satria io no loko manjaka ao an-tranony, manafina toerana maro miandry ny hamangiana azy izy io. Ny Palacio de La Moral, tranobe mendrika nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX, faha-XNUMX ary faha-XNUMX hita tao Calle Olavarrieta dia iray amin'izany. Ny iray hafa, ny telovan'ny mpanjono Ilay Cambaral,
Ny hermitage an'ny Nuestra Señora la Blanca sy ny Jiro jiro luarca mandrafitra endrika maritrano manana hatsarana kanto izy ireo. Any amin'ny faran'ny vodin-tany Atalaya dia manome fomba fijery tsy mety resy. Na dia miresaka fomba fijery aza isika dia tokony hiresaka ireo izay azo avy amin'ny hermitage of San Roque, miorina amin'ny havoana iray.
Ny iray hafa tsy maintsy jerena ao Luarca dia ny Bosque Jardín de la Fonte Baixa, zaridaina botanika tsy miankina faharoa any Espana. Zaridaina Atlantika mirefy 500 hektara mahery izay misy dian-tongotra, dobo ary kianja misy lohahevitra izay anolorana fitsidihana mitarika.
Fantatrao ve ny iray amin'ireo tanàna any amin'ny morontsirak'i Asturianina ireo?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Lifestyle » Tsangatsangana » Tanànan'ny morontsirak'i Asturianina izay tokony hotsidihinao
Fomba fampiasana aloe vera
Ny loza ateraky ny fitiavana mihoapampana